Religion – See More…
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်၏ (၃)နှစ် (၃)လ (၃)ရက် ဂူတွင်းတရားကျင့်ကြံမှု အဓိဋ္ဌာန်ထွက်မည်၊ မိုင်းကျက်ဂူသို့ လာရောက်ပြီး ဖူးမြော်နိုင်
June 24, 2022 Anonymous
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်၏ (၃)နှစ် (၃)လ (၃)ရက် ဂူတွင်း တရားကျင့်ကြံမှု ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့ အဓိဋ္ဌာန် ထွက်မည် ဂူတွင်း (၃)နှစ် (၃)လ (၃)ရက် အဓိဋ္ဌာန်ဝင်နေသည့် သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ အဂ္ဂမဟာ ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဉာဏသံဝရသည် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့တွင် ဂူတွင်းမှ အဓိဋ္ဌာန်ထွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း တောင်တနသာသနာပြုဆရာတော် ဦးသုခမိန္ဒ
ရန်ကုန်မြို့က မြွေပဟေဠိနှင့် ဖမ်းမိတဲ့ မြွေကြီးများရဲ့ နားခိုရာ စိတ္တသုခတပ်ဦး ကျောင်းတိုက်..
March 30, 2022 Anonymous
ရန်ကုန်မြို့က မြွေပဟေဠိနှင့် ဖမ်းမိတဲ့ မြွေကြီးများရဲ့ နားခိုရာ စိတ္တသုခတပ်ဦး ကျောင်းတိုက်.. လူနေရပ်ကွက်တွေမှာ ဝင်နေလို့၊ နေအိမ်ထဲမှာ တွေ့လို့ စသဖြင့် အကြောင်းအရာပေါင်းစုံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့က သွားရောက်ဖမ်းဆီးပေးခဲ့ရတဲ့ မြွေတွေဟာ သဘာဝတောထဲကို မပြန်ခင် ခေတ္တခရီးတစ်ထောက်နားခိုတဲ့ နေရာတစ်ခု ရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီနားခိုရာ နေရာကတော့ ရန်ကုန်မြို့ ၊
ကိုယ့်အိမ်မှာ ဘုရားတစ်ဆူ ကိုးကွယ်ထားပြီဆိုလျှင်…
March 25, 2022 Anonymous
ကိုယ့်အိမ်မှာ ဘုရားတစ်ဆူ ကိုးကွယ်ထားပြီဆိုလျှင် ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါ ဂုဏ်တော်တစ်ခုခုကို အာရုံလေးပြုထားပါ။ ဘုရားကို တစ်ခုခုလှူ ဒါန်းမှုပြုတဲ့အခါ သက်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကဲ့သို့အာရုံယူထားပါ။ ဘုရားကို ကိုးကွယ်မှုပြုတဲ့အခါ ဘုရားခန်းနေ့စဉ်သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ပါ။ ဘုရားခန်း သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခါ ပန်းရေချမ်းလည်းနေ့စဉ် ရေလဲလှယ်ပေးပါ။ ပန်းရေချမ်း လဲလှယ်မှုပြုတဲ့အခါ ရိုသေသမှု တလေးတစားပြုမူနေထိုင်ပါ။ ရိုသေသမှုနဲ့ စိတ်ထဲရှင်းနေတဲ့အခါ ပြုဆဲကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက် ပြီးနေပါ။
ဥပုသ်စောင့်ခြင်း ၏ အဓိပ္ပာယ်
❝ ဥပုသ်စောင့်ခြင်း ၏ အဓိပ္ပာယ် ❞ ═════════════════════ •• •• ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘာသာရေးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “ဥပုသ်စောင့်ခြင်း” ဆိုတာ ရှိတယ်။ဘာသာရေးကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာ ဥပုသ်နေ့ ရောက်လာပြီးဆိုရင် ဥပုသ်စောင့်ကြတယ်။ ဥပုသ်စောင့်တယ် ဆိုတာ ဘာလုပ်တာလဲလို့ သိရအောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ သုတ္တန်တွေကနေ ထုတ်နှုတ်ပြီး ရှင်းပြမယ်။ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာရဲ့
ဘုရားမွာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အရာေတြကို ဘာလို႔ ဌာပနာထည့္သြင္းတာလဲ…?
March 17, 2022 Anonymous
ဘုရားမွာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အရာေတြကို ဘာလို႔ ဌာပနာထည့္သြင္းတာလဲ…? တစ္ခ်ိဳ႕လည္းပဲ စဥ္းစားခ်င္မွစဥ္းစားမွာ။ ဘုရားထဲမွာ ဌာပနာတယ္။ ဌာပနာဆိုတာ… ထည့္သြင္းတာ၊ တည္ထားျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရတနာေတြ ဘာကိစၥ ဘုရားထဲမွာ ထည့္ၾကတာတုန္း။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အျမင္နဲ႔ ၾကည္ရင္ေတာ့ ဒါဟာ အက်ိဳးမရွိဘူးလို႔ ေျပာမွာေပါ့ေနာ္။
March 16, 2022 Anonymous
“ကိုယ်ကျင့်သီလနှင့် ကိုယ်ချင်းစာတရား” ▪️ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အခြေခံအားဖြင့် စောင့်ထိန်းရတဲ့ ၅ ပါးသီလ ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဟိုးငယ်ငယ် ကလေးဘဝကတော့ သိပ်နားမလည်သေးတဲ့အခါမှာ ဒါတွေကို ကုသိုလ်ရဖို့ စောင့်ထိန်းရတာလို့ ထင်ခဲ့ဖူးတယ်။ တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၅ ပါးသီလ ဆိုတာ သူတစ်ပါး ကိုယ့်ကြောင့် ဒုက္ခမရောက်အောင်
မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကြောင်းကို ကြားသိရသော အဇာတသတ်မင်းကြီး၏ အမှတ်သညာမဲ့ကာ မူမေ့လဲသွားရခြင်း အကြောင်းတရား(၃)ပါး..
မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကြောင်းကို ကြားသိရသော အဇာတသတ်မင်းကြီး၏ အမှတ်သညာမဲ့ကာ မူမေ့လဲသွားရခြင်း အကြောင်းတရား(၃)ပါး (၁)ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်အထူးဟူသော အမြိုက်အရသာကိုသိ၍ စွဲစွဲမြဲမြဲတည်သောမေတ္တာရှိခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း။ (၂)ပုထုဇဉ်သဒ္ဓါတရားဖြင့် စွဲမြဲစွာတည်သော ကြည်ညိုခြင်းရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း။ (၃)မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ကျေးဇူးပြုမူကြောင့် စိတ်နှလုံးနူးညံံ၍နေသောကြောင့်လည်းကောင်း မြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည်ကိုကြားသိရသော အဇာတသတ်မင်းကြီးသည် အမှတ်သညာကင်းမဲ့ကာ မေ့မျောသွားရပါသည်။ ဝိသညီဇာတော ယထာတံ ဘဂဝတော ဂုဏဝိသေသာမတရသညုတာယ
(၁)ယခုကြုံတွေ့နေတဲ့ ဂေါတမသာသနာတွင်းမှာ ကိုယ်တိုင်ရဟန်းသာမဏေ၊ သီလရှင်ဝတ်ပြီး ပရိယတ်၊ ပဠိပတ်သာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဖိုလ်။ (၂)မိမိရင်မှဖြစ်တဲ့သား၊ သူတစ်ပါးရင်မှ ဖြစ်တဲ့သားတွေကို ရဟန်းခံပေးခြင်း၊ ရှင်ပြုပေးခြင်းပြုတဲ့ပုဂ္ဖိုလ်။ (၃)မိခင်ဖခင်တို့ကို ဝတ်ကျေတန်းကျေမဟုတ်ဘဲ စိတ်ပါလက်ပါ ရိုသေစွာပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့ပုဂ္ဖိုလ်။ (၄)သရဏဂုံသီလ မပြတ် ဆောက်တည်သောပုဂ္ဖိုလ်။ (၅)ဘုရားသာသနာ တည်စိမ့်သောဌာ စေတီ၊ပုထိုး၊စည်းခုံ၊ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၊ဇရပ် စသည်တို့ကို ပြုပြင်တဲ့ပုဂ္ဖိုလ်၊ အသစ်ဆောက်လုပ်လှူးဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဖိုလ်။
ကျော်အောင်စံထား ဆရာတော်၏ အလောင်းတော်ကဿပ ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှ ဖတ်၍အဆင်ပြေရန် အတိုချုံး၍ ပြန်လည်ကူးယူ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ အမရပူရမြို့ သတ္တမမြောက်ကျော်အောင်စံထား ဆရာတော် အရှင်ဝါယမာဘိဝံသသည် ၁၃၁၆ခု တပို့တွဲလဆန်း ၁ရက်နေ့တွင် အလောင်းတော်ကဿပ ဖလှိုဏ်ဂူရှိရာသို့ စတင်ခရီးထွက်လာ၏။ ကပိုင်မှတဆင့် တောကြီးအတွင်းသို့ခြေလျှင် ကြွခဲ့၏။ ချောင်းမကြီးကို ဖြတ်ကျော်ပြီး လူသွားလမ်းလေး အတိုင်းလာခဲ့ရာ
“စကားခြောက်ခွန်းလူ၌ထွန်း၊ လေးခွန်းကိုပယ် နှစ်ခွန်းတည်”
March 13, 2022 Anonymous
(၁)အကြင်စကားသည် မဟုတ်မမှန်၊ အကျိုးစီးပွားနှင့်လည်းမစပ်၊ သူတစ်ပါးတို့လည်း မနှစ်သက်မနှစ်ခြိုက်၊ ထိုစကားမျိုးကို မြတ်စွာဘုရားသည် ပြောဆိုတော်မမူ။ (၂)အကြင်စကားသည် ဟုတ်မှန်၏၊ အကျိုးစီးပွားနှင့်ကားမစပ်၊ သူတစ်ပါးတို့လည်း မနှစ်သက်မနှစ်ခြိုက်၊ ထိုစကားမျိုးကိုလည်း မြတ်စွာဘုရားသည် ပြောဆိုတော်မမူ။ (၃)အကြင်စကားသည် ဟုတ်မှန်၏၊ အကျိုးစီးပွားနှင့်လည်းစပ်၏၊ သူတစ်ပါးတို့ကား မနှစ်သက်မနှစ်ခြိုက်၊ ထိုစကားမျိုး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ပြောသင့်သောအချိန်ကာလကို သိရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍